Jobho 30 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Jobho anotsanangura kuchinja kwaita upenyu hwake (1-31)
Anonyombwa nevanhu vasina zvavanobatsira (1-15)
Anoona sekuti Mwari haasi kumubatsira (20, 21)
“Ganda rangu rasviba” (30)
30 “Iye zvino vava kundiseka,+Varume vadiki kwandiri,Vane vanababa vandaizorambaKuisa pamwe chete nembwa dzaichengetedza makwai angu. 2 Simba remaoko avo raindibatsirei? Simba ravo raparara. 3 Vasakadzwa nenhamo, nenzara;Vanon’un’una zvinhu zviri muvhu rakaomaRava matongo uye rakaparadzwa. 4 Vanotemha mashizha anovava mumakwenzi;Zvekudya zvavo midzi yemiti yemugwenga. 5 Vanodzingwa pakati pevanhu;+Vanhu vanoshevedzera kwavari sezvavanoita mbavha. 6 Vanogara mumakoronga,Mumakomba ari muvhu nemumatombo. 7 Vanochema vari mumakwenziUye vanoungana murukato. 8 Sevanakomana vebenzi uye vemunhu asingazivikanwi,Vakadzingwa panyika. 9 Asi iye zvino vava kundinyomba kunyange munziyo dzavo;+Ndava chiseko* kwavari.+ 10 Vanondisema uye vanotambira kure neni;+Havazezi kundisvipira kumeso.+ 11 Mwari anditorera zvombo zvandaishandisa* uye andininipisa,Saka havachazvidzori pamberi pangu. 12 Kurudyi rwangu vanosimuka semhomho;Vanoita kuti nditizeUye vanoisa zvinhu zvinondipiringisha munzira yangu kuti ndiparare. 13 Vanoparadza migwagwa yanguUye vanowedzera dambudziko rangu,+Pasina kana anovarambidza.* 14 Vanouya vachiita sevari kupinda nepamadziro akadhirika;Vanodirana vachipinda makaparadzwa. 15 Kutya kwandikunda;Kukudzwa kwangu kwabviswa semhepo,Uye ruponeso rwangu runonyangarika segore. 16 Iye zvino upenyu hwangu hwava kupera;+Mazuva ekutambudzika+ andibata. 17 Mapfupa angu anondirwadza achibaya-baya* usiku;+Marwadzo acho anondin’un’una asingambonyarari.+ 18 Chipfeko changu chaunyanidzwa-unyanidzwa zvine simba;*Chinondidzipa sekora yechipfeko changu. 19 Mwari andiwisira mumadhaka;Ndava guruva nemadota. 20 Ndinochema kwamuri kuti mundibatsire, asi hamundipinduri;+Ndinosimuka, asi munongonditarisa. 21 Mandipandukira zveutsinye;+Munondirova nesimba rese reruoko rwenyu. 22 Munondisimudza nemhepo, mondiendesa kure;Mondikanda-kanda mudutu. 23 Nekuti ndinoziva kuti muchandidzikisa murufu,Kuimba ichasangana vanhu vese vapenyu. 24 Asi hapana anorova munhu akatyoka+Anenge achichema achida kubatsirwa panguva yenhamo. 25 Handina here kuchema vaya vakasangana nenguva yakaoma? Handina* here kuchema varombo?+ 26 Kunyange ndaitarisira zvakanaka, kwakauya zvakaipa;Ndaitarisira chiedza, asi kwakauya rima. 27 Kumona-mona kuri kuita mukati mangu hakuna kumira;Mazuva ekutambudzika akanangana neni. 28 Ndinofamba ndakasuruvara;+ hakuna zuva. Pakati peungano, ndinosimuka ndochemera kubatsirwa. 29 Ndava hama yehunguhwe*Neshamwari yevanasikana vemhou.+ 30 Ganda rangu rasviba uye rafunuka;+Mapfupa angu ari kutsva nekupisa kwakuri kuita.* 31 Rudimbwa rwangu rwava kungoridzwa pakuchema,Uye nyere* yangu yava kushandiswa pakuchema.
^ ChiHeb., “adhambisa uta hwangu.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “Pasina kana anovabatsira.”
^ ChiHeb., “Mapfupa angu anoboorwa.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “Kurwadziwa nenhamo kwandiunyanidza-unyanidza.”
^ Kana kuti “Mweya wangu hauna.”
^ Iyi imhuka yakada kufanana negava.
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “kutsva nefivha.”
^ Ichi chiridzwa chinoita zvekufuridzwa.